mParticle: Unganidza uye Unganidza Dhata reVatengi Kuburikidza nechengetedzeka APIs nema SDKs
Chishanu, April 9, 2021 Chishanu, April 9, 2021 Douglas Karr
Mutengi achangoburwa watakashanda naye aive neyakaomeswa dhizaini iyo yakabatana pamwe gumi nemaviri kana zvakadaro mapuratifomu uye akatowanda mapinda ekupinda. Mhedzisiro yacho yaive toni yekudzokorora, data remhando nyaya, uye kuoma mukugadzirisa kumwe kuita. Kunyange ivo vaida kuti isu tiwedzere pane zvimwe, isu takakurudzira kuti ivo vaone uye vashandise iyo Vatengi Dhata Platform (CDP) kuti vagadzirise zvirinani ese data ekupinda mapoinzi mumasisitimu avo, kuvandudza yavo data kurongeka, kutevedzera
China, January 14, 2021 China, January 14, 2021 Douglas Karr
Kana iwe uri kambani yebhizimusi kwawakagovanisa dhata mune akawanda masisitimu, iyo Dhata Dhata Platform (CDP) inenge ichidikanwa. Masystem anowanzo gadzirirwa kune yemukati yekambani maitiro kana otomatiki… kwete kugona kuona zviitiko kana dhata parwendo rwevatengi. Vatengi Dhata Mapuratifomu asati asvika pamusika, zviwanikwa zvinodiwa kuti ubatanidze mamwe mapuratifomu akadzivirira rekodhi rimwe rechokwadi apo chero munhu musangano angaone chiitiko chakatenderedza
Chishanu, Mbudzi 13, 2020 Chishanu, Mbudzi 13, 2020 Tim Beveridge
Mazuva ano kuwedzera kunetsekana kwevamwe, pamwe chete nekuparara kwecokie, zvinoreva kuti vashambadziri vava kuda kuendesa mamwe makomisheni akasarudzika, mune chaiyo-nguva uye pachiyero. Zvinotonyanya kukosha, vanofanirwa kuratidza kunzwira tsitsi uye vopa mameseji avo munzvimbo dzakachengeteka. Apa ndipo panobva simba rekutarisa mamiriro. Zvekurerekera kunongedzera inzira yekunangisa vateereri vanokodzera vachishandisa mazwi akakosha uye nemisoro yakatorwa kubva mune zvemukati zvakapotera kushambadzira, izvo hazvidi cookie kana imwe
Chipiri, Mbudzi 10, 2020 Chitatu, November 11, 2020 Tom Treanor
Zvinogona kuve nyore kufunga kuti munguva iripano inotyisa isina chokwadi, maCxO haana kugadzirira kuita mari hombe mukushambadzira kunoitwa nedhata uye nekushanda kwekambani. Asi zvinoshamisa kuti ivo vachiri kufarira, uye zvinogona kudaro nekuti vanga vachitotarisira kudzikira, asi tarisiro yemubairo wekunzwisisa chinangwa chevatengi uye maitiro zvaive zvakakosha kuti varege kuteerera. Vamwe vari kutomhanyisa zvirongwa zvavo zvekushandurwa kwedigital, nedata revatengi chikamu chepakati che